Hafatry ny Papa ho an'ny tanora "Miditra eto Madagasikara amin'ny alalanareo ny hoavy"
Vohidiala Nirodana tanteraka ny fiangonana FJKM
Nirodana ny fiangonana FJKM Vohidiala Finoana, Manakambahiny Andrefana, any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka.
Baiboly Masina Katolika An-dalana ny fanatsarana
Tanatin’ny herinandro ary nifarana ny sabotsy teo ny famerenana ny fijerena ny dikan-tenin’ny Baiboly Katolika.
Faribolam-pandinihana Silamo « Mila fahaizana ny miara-miasa amin’ny vahiny. »
Misy ny zavatra mbola mila alamina mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin’izao taona faharoa an’ity fitondrana ity izao, raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny faribolam-pandinihana Silamo.
Pasitera Mailhol Ataovy mangarahara ny fanoloana olona
Nety tamin’ny ankapobeny ny fomba nanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny governemanta, hoy pastera Mailhol raha ny resaka fandrindrana isam-paritra no jerena.
Pasitera Mailhol “Hisy fanonganam-panjakana amin’ity taona ity”
Nanao fangaraharana momba ny fifandanjana ara-paritra ny filoham-pirenena. Mety iny satria misy Malagasy daholo ny lafivalon’ny Nosy, hoy ny Pasitera Mailhol Christian Dieu Donné, raha nalaina ny heviny manoloana ny endrika vaovaon’ny governemanta.
Pastera Mailhol “ Vavaka no hahafahana miaro ny Malagasy”
Efa miaina tanteraka ao anatin’ilay vanin’andro apokaliptika isika ankehitriny na ilay antsoina hoe : andro farany, hoy pastera Mailhol, filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara omaly.
Irako Andriamahazosoa Ammi “Mila miorina amin’ny finoana isika”
Tontosa omaly alahady 19 janoary tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe-Antananarivo ny fanompoam-pivavahana lehibe
Tanora anankiroa no nijoro vavolombelona, nitantara tamin'ny Papa Fransoa sy ireo rehetra tonga nanatrika ny alim-bavaka teny Soamandrakizay,
ny lalam-piainana nodiavin'izy ireo sy ny faniriany avy. Niainga tamin'izay ny hafatra nampitain'ny Ray Masina tamin'ireo tanora malagasy, tamin'ny sabotsy teo. Amin'ny alalanareo, hoy izy, dia miditra eto Madagasikara sy ao amin'ny Eglizy ny hoavy. Mba hahatanteraka izany dia nanentana ny tanora mba hatoky tena ny Papa, satria ny Tompo no voalohany nametraka fitokisana aminareo, hoy ny nambarany. Nanasa ny tanora izy mba hatoky tena, hatoky ny fahafaha-manao sy ny fahaiza-manao. Tao anatin'izany koa anefa dia anisan'ny fanentanana nataon'ny Ray Masina tamin'ny tanora ny mba hiarahan'izy ireo miasa. Marina, hoy ny voalazany fa afaka mahazo zava-dehibe ny tsirairay nefa raha miaraka dia afaka manonofinofy sy manatanteraka zavatra tsy hita noanoa. Fangatahana moa no namaranan'ny Papa ny hafatra navelany ho an'ny tanora, dia ny hoe : "aza adino ny mivavaka ho ahy".